Fethullah Gülen Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "Fethullah Gülen"
ဂူလန် လှုပ်ရှားမှု၊ အာဒိုဂန်နဲ့ တူရကီ ဒီမိုကရေစီ တခန်းရပ် ဇာတ်သိမ်းခန်း
ဇူလိုင် ၂၁ ၊ ၂၀၁၆ ဆောင်းပါးရှင်-မြင်သစ် . လတ်တလော သတင်းတွေ မြင်ထား ကြားထားတဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ဒီခေါင်းစဉ်က ဝေဝါးသွားစေမည်မှာ အသေအချာပင်။ . လောလောဆယ် ကမ္ဘာကြီးက သိထားတဲ့ အာဒိုဂန်က စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို[Read More…]
July 21, 2016 — ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်
ဘာသာတရား ပြသနာ မဟုတ်သည့် လူသားဝါဒ နှင့် လူရိုင်းဝါဒတို့ကြား ထိပ်တိုက် ပဋိပက္ခ
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၁၅ M-Media အီရတ်နှင့် လက်ဘနွန်ရှိ အစ္စလာမ့် နိုင်ငံတော်(ISIL) ဟု အမည်ပေးထားသူများအပါအဝင် အကြမ်းဖက်တို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို မယုံနိုင်စရာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် စကားလုံးများဖြင့် မဖော်ပြနိုင်တော့အောင်ပင် ဝမ်းနည်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရမိပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုများသည် ယင်းတို့၏ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်[Read More…]
December 22, 2015 — သူ့အမြင်
အစွန်းရောက် ကင်ဆာရောဂါနှင့် စစ်ခင်းရန် နည်းလမ်း ၆ ရပ်
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ၊ ၂၀၁၅ M-Media – မိမိကိုယ်ကို အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော် Islamic State ဟု အမည်ပေးထားပြီး၊ ISIS အဖြစ် ကျော်ကြားသောအုပ်စုသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ လူသတ်ပွဲကြီးကို ရှေ့ဆက်နေဆဲဖြစ်သည်။ မွတ်စ်လင်မ်တို့အနေဖြင့် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်၏[Read More…]
November 30, 2015 — ဆောင်းပါး
‘ပြန်ရိုက်ဖို့ လက်တွေမရှိပါ၊ ပြန်ကျိန်ဆဲဖို့ စကားလည်း မရှိပါ’
နိုဝင်ဘာ ၁၃ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ခေတ်လူ တင်ဆက်သည်။ အခုဆိုလျှင် ကံကောင်းအကြောင်းလှစွာနဲ့ လူတိုင်းက သံစဉ်တူညီကို သီဆိုနေကြပါပြီ။ ဒီအတွက်ကြောင့် သည်းခံနိုင်စွမ်းဟာ အောက်ခြေအထိ ပိုပြီး မြန်မြန် ပြန့်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။[Read More…]
November 13, 2015 — ဆောင်းပါး
ခြစားမှု အရှိန်မြင့်တက်လာနေသော တူရကီနိုင်ငံ၏ ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ
ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ၊ ၂၀၁၄ M-Media ကျော်မိုးသိန်း တင်ဆက်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာ အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ငြိမ်မှုနဲ့ မျှတမှု ရှိမရှိအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု၊ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုမှု၊[Read More…]
December 30, 2014 — ဥရောပ, နိုင်ငံတကာသတင်း